Ny rhinitis - ny fanasitranana ny endriky ny mieux membres ao amin'ny lava nasala. Mampalahelo fa miseho amin'ny olona maro izany. Ny fitsaboana ny hatsiaka dia miankina amin'ny antony mahatonga ny fanabeazana sy ny faharetan'ny aretina. Maro ny antony mahakasika ny fivoaran'ny aretina.
Antony mahatonga ny olona mangatsiaka be
Anisan'ny antony mahatonga ny fandrosoana mangatsiaka be ny ankamaroany:
Fanafody rhinitis , izay matetika no averimberina. Anisan'io antokon'olona io ihany koa ny rhinitis.
Fanitsakitsahana anatomika ny asan'ny hôpitaly. Izany dia mety ho fanamafisana ny septaoma, izay matetika mitarika ho amin'ny hipertrophy amin'ny akorany, na ny tsy fahampian-tsakafo.
Ny voka-dratsin'ny rivotra mahatsiravina sy ny fofona ary ny vovoka mandritra ny fotoana maharitra. Ohatra, ny akora vy na mineraly dia manimba ny akoran'ny orona. Mandritra izany fotoana izany, mamono ny voan'ny epithelium ciliated ny vovoka ary miharatsy ny fivoahan'ny sekrana avy amin'ny trondro. Ny vondrona lehibe amin'ny singa bitika dia manampy amin'ny fambolena sy ny fananganana vato nasiana. Misy gaza sy dipoavatra mahavokatra mahatonga areti-mifindra, ary aorian'ny fotoana sy maharitra.
Ny tontolo iainana. Ny rivotra maina sy mafana dia manala ny mitefon'ny moka, izay mampihontsona ny asan'ny epithelium ciliated. Noho ny rivotra mangatsiaka dia misy fiovan'ny fikorontanan'ny fanaka.
Ny fizotry ny patholojika izay mitranga ao amin'ny fonika sy sinus nasala. Ohatra, ny hoditra dia mety ho tezitra amin'ny tsiranoka miparitaka avy amin'ny sinis paradisa. Izany dia miteraka sinusitis na sinusitis. Ankoatra izany, matetika dia misy fihenan-tsofina ny andalana nasalika na ny fihenan-tsasatra am-ponja. Amin'io tranga io dia manomboka amin'ny fanafoanana ny antony voalohany ny fitsaboana ny rhinitis.
Allergie na tsy fahazakana.
Ny fahasimban'ny rà mandriaka ao amin'ny mikrôza noho ny aretina voa, ny fihenam-bidy, ny fisotroan-dronono ary ny aretim-bavony.
Fanafody ho an'ny fitsaboana mangatsiaka
Misy karazana zava-mahadomelina marobe izay afaka manala soritr'aretina mandritra ny fotoana voafetra na manasitrana aretina mitaiza malemy:
Spray ho an'ny orona. Ohatra, Nazivin na Galazolin . Mamela ny fofon'izy ireo amin'ny valo izy ireo. Fa ny vatany dia ampiasain'izy ireo ara-bakiteny amin'ny 4 andro, izay mitarika amin'ny fitomboan'ny dosage sy ny fihenan'ny fotoana maharitra. Mandritra izany fotoana izany dia tsy hijanona intsony ny zava-mahadomelina.
Mandeha amin'ny orona. Afaka miaraka amin'ny antibiotika izy ireo, manodinkodina sy mitandrina ny mpitsabo. Aorian'ny fitsaboana lava, amin'ny toe-javatra sasany, dia mihatra ny electrophoresis sy ny laser amin'ny rhinitis.
Mandeha amin'ny rano ranomasina. Ny fivarotana manokana dia efa amidy amin'ny sigara. Ilaina fotsiny ny manatanteraka ny dingana.
Diphenhydramine. Ny tapany fahefatra amin'ny takelaka dia tsy maintsy tapahina ho vovony. Ampio rano fisotro kely vitsivitsy mba hahazoana volabe matevina. Ampiharina amin'ny rindrin'ny efamira izy io. Ilaina ny manadio ny orona aloha. Mba tsy hanomboka ny fahasosorana, dia afaka manosotra kisoa kely ianao.
Fitsaboana mangatsiaka be ao an-trano miaraka amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Hanampy izany fomba izany:
Compressa avy amin'ny kerosene. Ho fitsaboana mahomby amin'ny fitsaboana ny rhinitis, nanaporofo ny kerosine. Alohan'ny hatoriany dia tsy maintsy ampiharina eo amin'ny tokotanin'ny tongony sy ny lamba iray ampiasaina izany, izay voapoizina amin'ny solika ihany koa. Avy any ambony dia tsara ny mametraka ny kiraro volon'ondry.
Household soap. Mila manala ny rantsan-tananao ianao ary manamboatra ny foitra azo avy amin'ny orona araka izay azo atao. Tsy maintsy averina in-telo isan'andro ny dingana.
Ghee. Ny fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny olona dia manampy na dia tsy misy aza ny antony mahatonga ny rhinitis. Marina aloha fa mbola tsy misy herisetra mihatra amin'ny fractures sy ny fitsaboana matetika. Tokony ho kilaometatra ny rononon-dronono ary havaozina kely mandritra ny 30 minitra. Misintona imbetsaka avy eo amin'ny gaza manify. Ny ronono narotsaka dia natsipy ho amin'ny mety rehetra ary napetraka ao amin'ny vata fampangatsiahana. Avy eo dia misy ampahany kely aminy no alaina ary mihintsana ao anaty rano fandroana. Manidina 1-2 isan-kerinandro ny solika.
Astigmatisma - fitsaboana
Fanosorana avy amin'ny menge
Ny rafi-pitiliana olombelona
Gilbert syndrome - fitsaboana
Ny maso mitsitsy SIGNITSEF
Homezemium homamiôma - mari-pamantarana ampiasaina
Ny aretin'ny tampon'isa - Ahoana no ahafantarana ny aretina sy hanatsara ny kalitaon'ny fiainana?
Fihetsik'i Zika - fitsaboana
Famaranana ny fitsaboana - fitsaboana sy fitsaboana
Fitsaboana sy fisorohana ny mucus-mucus
Nahoana ny olona no mitranga?
Fanamaivanana ny voa - soritraretina, fitsaboana ary fanafody
Kylie Jenner dia nanao tafatafa nivantana tamin'ny famoahana ny Complex
Halley Berry nanao lamaody vaovao
Fitsaboana amin'ny zaza iray amin'ny hafanana ambony - ahoana ny fomba hanampiana ny zaza?
Ny zaridaina botanico an'i Jose Celestino Mutis
Kofehy lavitr'andriana - ahoana no fomba hiasana tsara sy haingana eo amin'ny fizarazarana lava?
Ny vokatra azo
Tandindomin-doza Bar Turboslim
Karazana fitaovana inona avy no nibuck?
Tablets izay manapaka ny fitondrana vohoka eo am-piandohana
Boots Winter Women's Boots
Dresses ho an'ny vehivavy bevohoka 2016
Famafana ny fakan'ny nify
Neimar no mpilalao lafo indrindra teo amin'ny tantara
Waffle vy amin'ny kitapo mena
Peroxide ho an'ny voajanahary - inona no ampiasainy?
Ultrasound amin'ny fanaka amin'ny tendany
Fungus ao amin'ny efitra fandroana - ahoana no ahafahanao manala sy misoroka ny fisehoana?
Hevitra ho an'ny lanonana taom-baovao
Mamela ny fahavoan'ny ratra - ny zava-mahadomelina malaza eo amin'ny tsena maoderina